Hosea 14 NIVUK – Hosea 14 ASCB | Biblica
Hosea 14 NIVUK – Hosea 14 ASCB
1Ao Israel, sane wʼakyi kɔ Awurade wo Onyankopɔn nkyɛn.
Wʼahweaseɛ firi wo bɔne!
sane kɔ Awurade nkyɛn.
Ka kyerɛ no sɛ,
na fa ahummɔborɔ gye yɛn,
yɛrentena akofoɔ apɔnkɔ so.
Yɛrenka bio da sɛ, ‘Yɛn anyame’
nkyerɛ deɛ yɛn ara de yɛn nsa ayɛ,
na wo mu na nwisiaa nya ahummɔborɔ.”
4“Mɛsa wɔn asobrakyeɛ yadeɛ.
Mɛfiri mʼakoma mu adɔ wɔn,
ɛfiri sɛ mʼabufuo nni wɔn so bio.
5Mɛyɛ sɛ obosuo ama Israel.
Ɔbɛfefɛ ayɛ frɔmm te sɛ sukooko.
Te sɛ Lebanon ntweneduro no
ɔde ne nhini bɛtim fam;
Nʼahoɔfɛ bɛyɛ sɛ ngo dua,
na ne hwa ayɛ sɛ Lebanon ntweneduro.
7Nnipa bɛtena ne nwunu ase bio.
Ɔbɛnyini ayɛ frɔmm te sɛ aburoo.
Ɔbɛfefɛ ayɛ frɔmm te sɛ bobe,
na ne din a ahyeta bɛyɛ sɛ nsã a ɛfiri Lebanon.
8Ao, Efraim ɛdeɛn na me ne ahoni wɔ yɛ bio?
Mɛgye no so na mʼani aku ne ho.
Mete sɛ dua a nʼahahan mpo;
sɛ wobɛso aba a, ɛgyina me so.”
9Hwan ne onyansafoɔ? Ɔbɛhunu yeinom mu.
Hwan na ɔwɔ nhunumu? Ɔbɛte yeinom ase.
Awurade akwan tene.
Ateneneefoɔ nante so,
nanso asoɔdenfoɔ sunti so.
ASCB : Hosea 14